DEG DEG:- Qarax ismiidaamin ah oo daqiiqado kahor lagu weeraray xarunta madaxtooyadda Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Qarax ismiidaamin ah oo daqiiqado kahor lagu weeraray xarunta madaxtooyadda Soomaaliya
Waxaa daqiiqado kahor qarax aad u xoogan islamarkaana ismiidaamin ah lagu weeraray xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoona qaraxaasi uu geystay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxaas oo ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay bar-kontrool ah oo laga galo xarunta madaxtooyadda Soomaaliya, waxaana ciidamadii ku sugnayd bartaasi Kontrool ay rasaas ooda kaga qaadeen gaariga kahor inta uusan qarxin.
Jugta qaraxa ayaa waxaa laga wada maqlay dhamaan degmooyinka Muqdisho, waxaana burbur aad u xoogan soo gaaray dhismayaal ku yaalay agagaarka madaxtooyadda.
Warar hodhac ah ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in bur-bur aad u xoogan uusoo gaaray dhismaha xarunta Hoteelka SYL oo ku yaala agagaagarka madaxtooyadda Soomaaliya,
Waxaa sidoo kale burbur aad u xoogan uusoo gaaray Hoteelka Siyaad oo isna ku yaala agagaarka madaxtooyadda, waxaana qaraxa kadib la maqlay rasaas culus oo ay inteeda badan rideen ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa barta-kontrool ee laga galo xarunta madaxtooyadda.
Ilaa iyo haatan lama oga tirada qasaare ee dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxaasi, waxaana goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda, waxaana aad u kacsan xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay.